Ady amin’ny dahalo : Ahetsika ireo « tireurs d’élite » mampiasa Dragonov -
AccueilRaharaham-pirenenaAdy amin’ny dahalo : Ahetsika ireo « tireurs d’élite » mampiasa Dragonov
Tafiditra amin’ny laharam-pahamehan’ny fitondram-panjakana ny ady amin’ny asan-dahalo. Raha ny nambaran’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, tsy maintsy atao ny ezaka rehetra amin’ny hamongorana ny asan-dahalo eto amin’ny firenena.
Noho izay indrindra, nisy fanazaran-tena sy sarin’ady nataon’ny teo anivon’ny tafika malagasy nandritra ny herinandro mahery ary nofaranana tamin’ny fampisehoana tifitra tamin’ny alalan’ireo fitaovam-piadiana mavesatra nahitana karazan-tafondro izany, ny zoma 18 aogositra teo, teny Tampoketsa, teny amin’ny tany miaramila izany.
Tafiditra indrindra amin’ny hetsika famongorana sy ady amin’ny dahalo na/sy fahavalom-pirenena izany. Araka izany, nanazava ny teo anivon’ny Etamazaoro jeneralin’ny tafika malagasy (Cemgam), ny jeneraly Théophile Rakotonirina, fa ahetsika amin’ny ady amin’ny dahalo any amin’iny faritra Atsimo iny ireo « tireurs d’élite » eo anivon’ny tafika malagasy.
« Manana « tireurs d’élite » avokoa ny vondron-tafika rehetra misy eto Madagasikara. Noho izany handefa maro amin’izy ireo hiady amin’ny dahalo ary hanampy tosika ireo mpitandro filaminana efa any an-toerana ny eo anivon’ny tafika malagasy », hoy ny jeneraly Théophile Rakotonirina.
Raha ny fanazavana hatrany, tsy hitsitsy amin’ny ady atrehany ireo “tireurs d’élite” ireo ary hampiasa ny fitaovam-piadiana mifandraika amin’izany, toa ny basy Dragonov, izay fitaovam-piadiana vita Rosianina, anisan’ny tena fampiasa amin’ireny ady amin’ny fahavalo ireny. Voalaza mantsy fa efa azo hosokajiana ho ady goavana mantsy ny ady amin’ny dahalo, izay fahavalom-pirenena ka izay indrindra no hanetsehana ireo “tireurs d’élite”-n’ny tafika ireo.
Ankoatra izay, nanambara ny teo anivon’ny Cemgam fa manana iraka manokana mihitsy ireo « tireurs d’élite », izay mampalemy ireo fahavalo amin’ny alalan’ny fahaizany manokana izay nampiofanana azy ireo.
Etsy andaniny, voalaza fa isaka ny hetsika manokana, tsy maintsy mitondra « tireurs d’élite » hatrany ny eo anivon’ny tafika na/sy mpitandro filaminana. Raha ny fanazavana mantsy, maro dia maro ny « tireurs d’élite » ananan’ny tafika malagasy ary mihetsika avokoa izy ireo amin’ny ilàna azy.
Nambaran’ny jeneraly Théophile Rakotonirina fa ezahin’izy ireo ny hananganana ireo kaompania roa an’ny tafika malagasy ao Ihosy hiadiana amin’ny dahalo ka ahitana « tireurs d’élite » marobe. Azo antoka ato ho ato fa hihena ny asan-dahalo amin’ireo faritra mena manerana ny Nosy.